Danny Mann – Cast – Channel Myanmar
IMDB: 8.3/10 804,825 votes
Monsters University (2013) A look at the relationship between Mike and Sulley during their days at Monsters University when they weren't necessarily the best of friends. (ဘာသာပြန်သူကတော့ Myat Noe Wutt Yi ပါ) File Size : (850 MB) and (370 MB) Quality : Blu-Ray 720p Running Time : 1hr 44min Format : Mp4 Genre : Animation, Adventure, Comedy Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Source : 1080p.BluRay.x264-CiNEFiLE Translated by Myat Noe Wutt Yi Encoded by Thanhtike Zaw
IMDB: 7.3/10 272,633 votes
Monsters, Inc. (2001) James Sullivan and Mike Wazowski are monsters they earn their living scaring children and are the best in the business... even though they're more afraid of the children than they are of them. Whenachild accidentally enters their world James and Mike suddenly find that kids are not to be afraid of and they uncoveraconspiracy that could threaten all children across ...
IMDB: 8.1/10 692,917 votes
Happy Feet Happy Feet ကို 90Kids တွေ မှတ်မိအုံးမှာပါ သီချင်းမဆိုတက်ပေမယ့် အက ကျွမ်းကျင်တဲ့ ပင်ဂွင်း ငှက်ကလေး ရဲ့ စွန့်စားခန်း ခရီးစဉ်တစ်ခုကိုပေါ့ ဒီ Animation ရုပ်ရှင်ဟာ လူတော်တော်များများကို သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အသိပညာတွေ ပေးပါတယ် ကျနော် ကိုယ်တိုင် ဒီဇတ်ကားရဲ့ နောက်ဆုံးတစ်နေရာမှာ ရင်ထဲ ဆို့နင့်ပြီး မျက်ရည်ကျလောက်အောင် ၀မ်းသာမိဖူးတယ် (ငယ်ငယ်တုန်းကပါ) :D ဇတ်လမ်းလေး အစ မှာတော့ ပင်ဂွင်းတွေ ဟာ ဖူးစာဖက် ရရှိဖို့ သီချင်းအဆိုကောင်းရပါတယ် ပင်ဂွင်းမ ကို ပိုးပန်းဖို့ ပင်ဂွင်းအထီးတွေက သီချင်းဆိုပြရတယ် မကြိုက်ရင် ပင်ဂွင်းမ ချေတာ ခံရမှာ ဖြစ်ပြီး အသံ ပါဝါ ကောင်းကောင်း နဲ့ ခံစားချက် ကောင်းကောင်းနဲ့ ညို့ငင်စွာ သီချင်းဆိုတက်တဲ့ ဘဲကြီး (ပင်ဂွင်းအထီး) တွေကတော့ စော်ကြည်ဘဲ တွေပါပဲ.... (ယခုနေရာတွင် ကြေငြာထည့်သွင်းလိုပါက 09782222335 သို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်) ဒီလိုနဲ့ နာမည်ကျော် အဆိုကောင်း အသံကောင်းတဲ့ ပင်ဂွင်း အထီး နဲ့ အမ ညားပါလေရော သူတို့ဆီမှာ အစာရေစာ ရှားပါးလွန်းတော့ ဥထားတဲ့ ဥတွေကို အထီးတွေက ၀ပ်ပေးရပြီး အစ်မတွေကတော့ ရာသီတစ်ခုမှာ လနဲ့ချီပြီး အစာရှာထွက်ရပါတယ် အဲ့ဒီမှာပဲ ဥ ...
IMDB: 6.5/10 149,716 votes
Despicable Me3(2017) ချစ်စရာMinionsလေးတွေကိုအားလုံးမှတ်မိကြမှာပါ။ Despicable me 1 ကနေစပြီးအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ဒီဇာတ်ကားကို Illumination Entertainment နဲ့ Universal Picture တို့ကနေပြီး Despicable me 3ဆိုပြီး ထပ်မံရိုက်ကူးထုတ်လုပ်လိုက်ပါပြီ။ ဂရူးတယောက်တော့ဒီတခါ ဘော်တယ်ဇာ ဘရက်တ် ကိုနှိမ်နင်းရပါတော့မယ်။ ဘရက်တ်ဟာငယ်စဉ်ကကလေးသရုပ်ဆောင်ဖြစ်သလို၈ဝခုနှစ်လောက်ကသူသရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဇာတ်ကောင်တွေကိုစွဲလန်းရူးသွပ်နေသူတယောက်ပါ။ ဒီကားလေးမှထူးခြားတာတော့ ဂရူးရဲ့အမြွာညီအစ်ကိုတယောက်ပေါ်လာတာပါပဲ။ ဒရူးဟာ ဂရူးလို ဗီလိန်အလုပ်တွေ လုပ်ဖို့ အရမ်းစိတ်အားထက်သန်နေပါတယ် ဂရူးကလည်း သူ့အလုပ်ပြန်ရဖို့ ဗီလိန်ဘော်တယ်ဇာ ဘရက်တ်ကို ဖမ်းဖို့လိုနေတာကတစ်ကြောင်း ဒရူးကလည်း ဗီလိန်လုပ်ပြီး ဘရက်တ်ခိုးသွားတဲ့စိန်ကို ပြန်ယူဖို့ ညီအစ်ကိုနှစ်ယောက်သား အတိုင်အဖောက်ညီညီ ကြိုးပမ်းကြပါတယ် ထုံးစံအတိုင်းရယ်ရယ်မောမောပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ ထွက်ခဲ့ပြီးတဲ့ Despicable me1,2လိုပဲ ပရ်ိသတ်ကိုကျေနပ်စေမှာပါ။ အဲတော့ ဒရူးနဲ့ဂရူးတို့ ဘယ်လိုကမ္ဘာကြီးကိုကယ်တင်ကြမလဲဆိုတာကိုတော့ ဇာတ်လမ်းအပြည့်အစုံကို ရှုစားကြပါဦးဗျာ (မြန်မာစာတန်းထိုးဖိုင်ကိုတော့ Mmsubtitles မှကူညီပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်) File Size : (700 MB) and (320 MB) Quality : 720pWebrip Running Time : 1hr 30minutes Format ...